Buy မိုးသိင်္ခ_ကျောက်ပန်းချီ (0Ks) in ရန်ကုန် on ipivi.com
ရောင်းချသူ: မိုးသိင်္ခ ဓာတ်ပုံဘောင်ဖြန့်ချိရေးနှင့် ကျောက်ပန်းချီ
သင့်ဘ၀မှာ အရေးပါတဲ့သူတွေအတွက် Surpriseလက်ဆောင် ပေးချင်ပါသလား ??
လက်ရာ အရမ်းမိုက်တဲ့ #မိုးသိင်္ခ ကို ဆက်သွယ်လိုက်နော်
#ကို့ချစ်သူ အတွက် ချွတ်စွပ် Surprise စရှိတဲ့ အမှတ်တရတိုင်းအတွက်
မိုးကုတ်ကျောက်အစစ်နဲ့ စီချယ်ထားသော #ပုံတူကျောက်ပန်းချီ မှာယူနိုင်ပါသည်။
Family မှာ စိတ်ချယုံကြည်စွာ အပ်နှံလိုက်ပါ
အသေးဆုံး size ၃သောင်းကျပ်
ပုံမှန်size ၄သောင်းကျပ် ကနေ
Size အလိုက် ဈေးနှုန်းများ ရယူရန် Chat box or Viber မှာ Hiပေးပါနော်
Viber no. 09771717114
Ph no. 09771717114
လမ်း၆၀ ၊ မနော်ဟရီလမ်းနှင့် ခိုင်ရွှေဝါလမ်းကြား ၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၊ မန္တလေးမြို့။